Waqti Aad Kaga Dacwooto Meheraddaada (Ha Ii Dhegin) | Martech Zone
Khamiis, Maarso 12, 2015 Khamiis, Maarso 12, 2015 Douglas Karr
Waxay ku bilaabatay Tweet…
Douglas Karr Abaal marin Rap https://t.co/oPodYLEZnQ @douglaskarr #rappitt http://t.co/gVR64opiLM
In la yiraahdo waa la i afuufay waa hadal macno yar. Qosolkii waan ka joojin waayey sida wanaagsan ee raabkan loo qorayn oo waxaa i baaray qof aan waligey la kulmin. In qof uu ahaa Dan Stokes.
Dan ayaa bilaabay Rappitt.com iyo inuu ahaa ganacsi bilow ah oo dhaqaale xannibmay, wuxuu raadinayay habab gaar ah oo lagu helo erayga (ka hel?) Dibedda oo ku saabsan ganacsigooda. Waxay heleen Martech Zone oo markaan eegay kadib waxaan go’aansaday inaan bartilmaameed weyn noqdo.
Waan jeclahay marketing suuq goriga iyo suuq geynta saamaynta dhacay ilaa tweet. (Markale ayaan sameeyay). Waa tan sheekada Dan:
Waxaan kobciyay jaceylka muusikada, iyo gaar ahaan boobka, 15 sano kahor. Markii hamigeyga muusikada uu sii weynaaday, waxaan ogaaday inaan doonayo inaan tan ka doorto xirfadeyda… anigoo maroojin doona. At Rappitt.com, waxaan si dhab ah u dareemeynaa inaan abuurnay oo kaamilnay xirfadeena, natiijadu waa wax soo saar abuuraya farxad caam ah iyo ka warqabka munaasabadaha oo dhan. Waxaan u sameeyay 100-ka fiidiyowyadan asxaabta, asxaabta, iyo ganacsatada intaba sannadihii la soo dhaafay.
Qiimaha Dan ayaa ka baxsan caddaaladda noocan ah hal-abuurka iyo fiidiyowga ugu dambeeya waa uun gunno lagu daray. Ma ogtahay inaad rabto hees rap ah oo kusaabsan astaantaada bulshada ama ganacsigaaga miyaanad rabin?
Waxaan rajeynayaa, Dan inuu xoogaa amarro ah idinka helo dadweynoow istiraatiijiyaddiisa weyn. Aynu caddeynno in noocan suuq-geynta wax-ku-oolka ahi shaqeynayo!
Tags: funnyraabkaadeegga kufsigarappitt